साथीहरूसँग घडी 36
प्रतिलिपि अधिकार, 1912, HW PERCIVAL द्वारा।
ईगल किन विभिन्न राष्ट्रहरूको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ?
यस्तो सम्भावना छ कि विभिन्न उद्देश्यहरूले यस चीललाई ग्रहण गरेका धेरै राष्ट्रहरूले यसलाई प्रतीकको रूपमा लिनेछन्। यद्यपि यो लिइएको हो कि यो ग्रहण गरिएको थियो किनकि यसले प्रकृति र नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्‍यो, महत्वाकांक्षा, राष्ट्रहरूको आदर्श जसले यसलाई आफ्नो मानकको रूपमा लिएको छ।
चील चराहरू र हावाको राजा हो, जसलाई सिंह जनावरहरूमा दयालु मानिन्छ। यो शिकारको चरा हो, तर विजयको पनि। यो ठूलो धीरजको पक्षी हो, छिटो र लामो उडानमा सक्षम छ। यो आफ्नो शिकारमा छिटो चुहिन थाल्छ, छिटो उठ्दछ, र महान उचाइमा भव्यतामा उडन्छ।
एक राष्ट्र शक्ति, धीरज, साहस, वेग, प्रभुत्व, शक्ति चाहान्छ। एउटा ईगलसँग यी सबै हुन्छ उच्च डिग्रीसम्म। यो मान्नु उचित छ कि यी केहि कारणहरू छन् जुन राष्ट्रहरू वा जनजातिहरू वा शासकहरूले चीललाई आफ्नो मानकको रूपमा अपनाए। तथ्य यो हो कि यो हाम्रो ऐतिहासिक कालका धेरै विजयी राष्ट्रहरूको प्रतीक हो, र विशेष गरी ठूलो दूरीमा युद्ध गर्नेहरूका लागि।
यी चील को विशेषताहरु हुन्। तर राष्ट्रहरु जो यो चरा लाई यसको प्रतीक को रूप मा ग्रहण गर्दछन्, सामान्यतया योग्यता प्राप्त गर्दछ वा विशेष गरी यसको विशेष प्रकृति वा आशय वा आदर्श ईगल संग एक आदर्श वाक्य द्वारा वा ईगल टाउन्स वा उसको चोंच, जस्तै एक शाखा, बाण, मा एक आदर्श वाक्य द्वारा। झण्डा, ढाल, राजदण्ड, बिजुली, जसमध्ये प्रत्येक एक्लै वा अन्य प्रतीकहरु संग संयोजन मा राष्ट्र को चरित्र वा राष्ट्र लाई मनपर्ने विशेषताहरु को प्रतीक हो र यसको उद्देश्य के हो।
यी सबै एक व्यावहारिक र भौतिक दृष्टिकोणबाट हो। चीलको अर्को प्रतीक पनि छ जहाँ समान गुणहरू बढी आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।
यो चार "जीवित प्राणीहरू" मध्ये एक हो जसमा Apocalypse मा उल्लेख गरिएको छ जो परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि खडा छन्। चील राशिफलको चिन्ह वृश्चिकका लागि तोकिएको छ। यसले मानिसमा भएको आत्मिक शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। चील मानवमा कुटिल, आध्यात्मिक शक्ति हो जुन सबैभन्दा ठूलो उचाइमा पुग्न सक्छ। चीललाई आध्यात्मिक अर्थमा प्रतीकको रूपमा लिने राष्ट्र वा मानिसले आफ्नो भौतिक प्रतीकवादमा चीलले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै आध्यात्मिक तरिकामा हासिल गर्नु हो। ऊ आफु भन्दा तल भएको सबैमा विजयको लक्ष्य राख्दछ र उच्च शक्तिमा बढ्नको लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दछ। चीलले प्रतिनिधित्व गरेको यो शक्तिलाई निर्देशन दिएर, उहाँ आफ्ना चाहनाहरूको विजेता हुनुहुन्छ, आफ्नो शरीरको क्षेत्रमा प्रभुत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन मार्फत उहाँ माथि उक्लनुहुन्छ र चीलले जस्तै गर्भाशय ग्रीवाको माथिपट्टि शरीरको पहाडी अग्लो ठाउँमा आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ। त्यसैले ऊ चिन्ह वृश्चिकबाट उठ्छ, जुन मेरुदण्डको सबैभन्दा तल्लो अन्त हो, माथितिर, जुन टाउकोमा जान्छ।
क्या डबल हेड ईगल अब केहि देशहरु को राष्ट्रीय प्रतीक को रूप मा प्रयोग गरिन्छ, र बाइबिलिक समय को पुरातन हितिट्स को स्मारकहरुमा भेटिन्छ, मानिस को आहिरो हालत को अनुकरण गर्दछ?
जब एउटा डबल हेड चीललाई राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने कहिलेकाँही यो चाहिन्छ कि अन्य देशहरू बीच दुई देश वा देश एकजुट हुन्छन्, यद्यपि सरकारका दुई प्रमुख हुन सक्छन्। जबसम्म अन्य प्रतीकहरूले पुरानो हित्तीहरूको स्मारकहरूमा दुईवटा टाउको भएको चीलसँग नआएसम्म यो प्रतीक एन्ड्रोजेनस मानिसलाई संकेत गर्दैन। Androgynous मानिस वा दोहोरो लिed्ग मानिस, दुई कार्यहरू, विपरीत स्वभावको दुई शक्ति सामिल गर्नु पर्छ। दुबै टाउको चील प्रकृतिमा एकै छ, दुबै टाउको चीलको हो। एन्ड्रोगेनस मानिसलाई चीलले प्रतिनिधित्व गर्नका लागि, चील सँगसँगै वा सिंहसँग जोड्नु पर्छ, यद्यपि बिभिन्न क्षेत्रमा चराको बीचमा चीलले जनावरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पुरातन रोजिक्रोसियनहरूले “रातो सिंहको रगतको” कुरा गर्थे जसबाट उनीहरू मानिसमा चाहना वा जनावरको प्रकृतिलाई जनाउँथे। तिनीहरू "सेतो चीलको ग्लूटेन" को पनि कुरा गर्थे जसबाट उनीहरू मानिसमा भएको मनो-आध्यात्मिक शक्तिलाई बुझाउँछन्। यी दुई, रातो सिंहको रगत, र सेतो चीलको चमक, उनीहरूले भने, भेट्नु पर्छ र सँगै हुनु पर्छ र विवाह गर्नुपर्दछ, र उनीहरूको मिलनबाट अझ ठूलो शक्ति विकास हुन्छ। यो पागलको खाली ravings जस्तो लाग्दछ जबसम्म प्रतीकवाद बुझिदैन। जब यो हुन्छ, यो अनुभूति हुन्छ कि उनीहरू शारीरिक processes प्रक्रियाहरूको बारेमा बढी बुझ्दछन् जुन उनीहरूलाई creditण दिएका भन्दा।
रातो सिंहको रगत सक्रिय इच्छा हो जुन शरीरको रगतमा बस्दछ। सेतो चीलको ग्लुटेन यसको पहिलो पक्षमा शरीरमा लिम्फ हुन्छ। लिम्फ हृदयमा प्रवेश गर्दछ र रगतको साथ एकजुट हुन्छ। यस युनियनबाट त्यहाँ अर्को शक्तिको जन्म हुन्छ जुन पुस्तालाई प्रेरणा दिन्छ। यदि यो आवेग संतुष्ट छ भने, cheकेमिस्ट्सले भने, कि सिंह कमजोर हुनेछ र चील उगने शक्ति गुमाउनेछ। यद्यपि, सेतो चीलको रातो र रातो सिंहको रगत एकसाथ मिसिन जारी रह्यो भने, सिंह बलियो र चील शक्तिशाली हुनेछ, र तिनीहरूको आउँदैबाट नयाँ जन्म शक्ति दिन्छ शरीरमा युवा र दिमागमा शक्ति।
यी दुई, सिंह र चील, दुई सिद्धान्तहरूको प्रतीक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट मान्छे को मर्दाना र महिला पक्षहरू। एन्ड्रोजिन एक हो जससँग मर्दाना र फेमिनाइन स्वभावहरू र कार्यहरू छन्। सिंह र चील, रगत र लिम्फ, एउटै शरीरमा आउँछन् र शरीरमा एक नयाँ शक्ति उत्पन्न गर्न आफ्नो कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछन् र बाह्य अभिव्यक्तिको आवेगलाई मार्ग दिए बिना, नयाँ शारीरिक शक्ति सिर्जना गर्दछ जुनबाट जन्मिएको छ नयाँ जुन जुन चीलले जस्तै पृथ्वीबाट उदाउँदछ र माथिल्लो क्षेत्रमा जान्छ।